ထူးဆန်းတဲ့အဆိပ်ငွေ့တွေကြားက သူတို့နှစ်ယောက်လွတ်မြောက်နိုင်ပါ့မလား? – Trend.com.mm
Posted on August 7, 2018 by Noel
တောင်ကိုရီးယားမင်းသားချော Jo Jung Suk နဲ့ Girls’ Generation အဖွဲ့ဝင်မင်းသမီးချော YoonA တို့ကို အတူတွဲဖက်မြင်တွေ့ရမယ့်ဇာတ်ကားလေးရှိရင် အားပေးကြမှာလား ပရိသတ်ကြီး?
သူတို့နှစ်ယောက်ကို ‘Exit’ ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားမှာ မြင်တွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဇာတ်လမ်းတွဲ
မဟုတ်ပဲ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားဖြစ်လို့ ဇာတ်လမ်းတွဲလို လည်ပင်းတရှည်ရှည်မျှော်နေစရာမလိုတော့ပါဘူးနော်။
ဒါရိုက်တာ Lee Sang-Geun ရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပြီး ဇာတ်လမ်းပုံစံက ရောဂါဆိုးဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်တဲ့အကြောင်း၊လွတ်မြောက်အောင် ဘယ်လိုတွေကြိုးစားထွက်ပြေးရမလဲဆိုတာကိုအသားပေးရိုက်ကူးဖော်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇာတ်ကားမှာ မင်းသား Jo Jung Suk က နှစ်အတော်ကြာ အလုပ်ရှာနေပေမဲ့ မတွေ့သေးတဲ့အလုပ်လက်မဲ့ကောင်လေး Yong Nam အဖြစ်ပါဝင်သရုပ်ဆောင်မှာဖြစ်ပြီး YoonA ကတော့ Eui Joo ဆိုတဲ့ကောင်မလေးအဖြစ်ပါဝင်သရုပ်ဆောင်သွားမှာပါ။
Yong Nam က သူ့ရဲ့ အမေအသက် ၇၀ပြည့်အတွက် ဘွဲ့နှင်းသခင်ခန်းမမှာ ကျင်းပပေးခဲ့ပြီး အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲ သူနဲ့တက္ကသိုလ်အတူတူတက်ခဲ့တဲ့ဂျူနီယာကျောင်းသူလေး Eui Joo ကိုတွေ့ခဲ့ပါတယ်။တပြိုင်တည်းမှာပဲ မြို့ထဲကို ထူးဆန်းတဲ့အဆိပ်ငွေ့တွေဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီး သူတို့ကို ရောဂါမကူးစက်ခင် လွတ်မြောက်အောင်ထွက်ပြေးရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇာတ်ကားကိုတော့ သြဂုတ်လ ၄ရက်နေ့က စတင်ရိုက်ကူးနေတာဖြစ်ပြီး လာမယ့် ၂၀၁၉ခုနှစ်နွေရာသီမှာတော့ ရုပ်ရှင်ရုံတွေမှာပြသနိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။
တောငျကိုရီးယားမငျးသားခြော Jo Jung Suk နဲ့ Girls’ Generation အဖှဲ့ဝငျမငျးသမီးခြော YoonA တို့ကို အတူတှဲဖကျမွငျတှရေ့မယျ့ဇာတျကားလေးရှိရငျ အားပေးကွမှာလား ပရိသတျကွီး?
သူတို့နှဈယောကျကို ‘Exit’ ဆိုတဲ့ဇာတျကားမှာ မွငျတှရေ့မှာပဲဖွဈပါတယျ။ဇာတျလမျးတှဲ
မဟုတျပဲ ရုပျရှငျဇာတျကားဖွဈလို့ ဇာတျလမျးတှဲလို လညျပငျးတရှညျရှညျမြှျောနစေရာမလိုတော့ပါဘူးနျော။
ဒါရိုကျတာ Lee Sang-Geun ရိုကျကူးထားတာဖွဈပွီး ဇာတျလမျးပုံစံက ရောဂါဆိုးဘေးအန်တရာယျကရြောကျတဲ့အကွောငျး၊လှတျမွောကျအောငျ ဘယျလိုတှကွေိုးစားထှကျပွေးရမလဲဆိုတာကိုအသားပေးရိုကျကူးဖျောပွသှားမှာဖွဈပါတယျ။ဒီဇာတျကားမှာ မငျးသား Jo Jung Suk က နှဈအတျောကွာ အလုပျရှာနပေမေဲ့ မတှသေ့ေးတဲ့အလုပျလကျမဲ့ကောငျလေး Yong Nam အဖွဈပါဝငျသရုပျဆောငျမှာဖွဈပွီး YoonA ကတော့ Eui Joo ဆိုတဲ့ကောငျမလေးအဖွဈပါဝငျသရုပျဆောငျသှားမှာပါ။
Yong Nam က သူ့ရဲ့ အမအေသကျ ရဝပွညျ့အတှကျ ဘှဲ့နှငျးသခငျခနျးမမှာ ကငျြးပပေးခဲ့ပွီး အဲ့ဒီအခြိနျမှာပဲ သူနဲ့တက်ကသိုလျအတူတူတကျခဲ့တဲ့ဂြူနီယာကြောငျးသူလေး Eui Joo ကိုတှခေဲ့ပါတယျ။တပွိုငျတညျးမှာပဲ မွို့ထဲကို ထူးဆနျးတဲ့အဆိပျငှတှေ့ဝေငျရောကျလာခဲ့ပွီး သူတို့ကို ရောဂါမကူးစကျခငျ လှတျမွောကျအောငျထှကျပွေးရတာပဲဖွဈပါတယျ။ဒီဇာတျကားကိုတော့ သွဂုတျလ ၄ရကျနကေ့ စတငျရိုကျကူးနတောဖွဈပွီး လာမယျ့ ၂၀၁၉ခုနှဈနှရောသီမှာတော့ ရုပျရှငျရုံတှမှောပွသနိုငျဖို့ရညျရှယျထားတယျလို့လညျးသိရပါတယျ။